Mamolavola ny PNAN-4
Ny vovona HINA dia Hetsika Iraisana Natokana ho an'ny Ady amin'ny tsifanjarian-tsakafo. Anisan'ny andraikitra goavana sahanin'izy ireo ny famolavolana ny drafitr'asa fanjarian-tsakafo, manomboka izao ny famolavolana ny PNAN andiany faha-4 na "plan National d'Action Nutrition 4". Araka ny fanazavana nataon'i Andriamatoa Be Florent tompon'andraikitra ao amin'ny vovonana HINA na "plateforme HINA" eto amin'ny faritra Atsinanana fa tapitra amin'ity taona ity ny PNAN 3 ka dieny izao sahady izy ireo dia efa eo am-pamolavolana ny PNAN 4.
Raha tsiahivina kely ny tantara dia tamin'ny taona 2004-2009 ny PNAN 1, 2012-2015 ny PNAN 2, 2015-2021 ny PNAN 3. Nohon'ny hamehana ara-pahasalamana dia misy ireo hetsika tsy vita tamin'ny PNAN 3 ka tonga dia hoatambatra amin'ny PNAN 4, izy ireo moa dia miara-miasa tanteraka politika apetraky ny eo anivon'ny farita Atsinanana. Porofon'izany ny fanaovan-tsonia izay nanamafy ny fiaraha-miasa eo amin'ny roa tonta izay natao tamin'ny 11 may 2021 lasa teo.
I Ramatoa Zafitsara Marie Coordinateur ny HINA dia mangataka fiaraha-mientana amin'ireo olona rehetra misehatra ao anatin'ny fanatsarana ny sakafo mahavelona, mahasalama sy ny fitehirizana ary ny famokarana azy. Araka ny antotan'isa nomen'izy ireo ihany koa moa dia 46% ny ny tahan'ny olona tratran'ny tsy fanjarian-tsakafo mahery vaika na "taux de malnutrition aiguë eto amin'ny faritra Atsinanana. Misokatra hoan'ny sarababem-bahoaka ny biraon'ny vovonana HINA handray ireo soso-kevitra avy amintsika hoentina hiadiana amin'ny tsy fanjarian-tsakafo eto an-toerana.
(212) S.Lantomalala : 25-05-2021 - 10:00